Portugal oo sheegtay inay Xeebaha Soomaaliya u soo dirayso Ciidamo | raascasayrmedia.com
← Madaxweyne Shariif oo sheegay in uu ogolyahay doorashada
Burcabadeed Soomaaliyeed oo afduub ku qabsaday markab laga leeyahay dalka Taliyaaniga iyo shaqaalihiisii →
Portugal oo sheegtay inay Xeebaha Soomaaliya u soo dirayso Ciidamo
Dowladda dalkaPortugalayaa sheegtay inay Ciidamo u soo dirayso biyaha Soomaaliya, iyadoo dhinaca kale kooxaha burcad badeeda Soomaalida ay afduubteen Markaba laga leeyahay dalka Talyaaniga.
Ciidamada Midowga Yurub ee ku sugan Xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in kooxaha burcad badeeda Soomaalida ay gacanta ku dhigeen Markab uu ka dul babanayay Calanka wadanka Talyaaaniga kaasi oo marayay meel aan sidaasi uga fogayn Xeebaha dalka Cuman.
Markabka ayaa la sheegay inay saarnaayeen shaqaalo gaaraya ilaa 22- kuwaasi oo u kala dhashay wadamada Talyaaniga iyo Philippine, waxaana kooxaha burcad badeeda Markabkaasi ay ula soo dhaqaaqeen Xeebaha Soomaaliya halkaasi oo ay ku haystaan Maraakiib iyo shaqaale kale oo aad u farabdan.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay Ciidamada dowladdaPortugaloo lagu magacaabo Ramos de-Oliveira ayaa waxaa uu sheegay in Xeebaha Soomaliya ay u soodiri doonaan Ciidamao Mariinis ah oo ka mid noqda kuwa Midowga Yurub ee iminka howlaha la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida ah ka wada Xeebaha Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa waxaa uu sheegay in Ciidamada Mariiniska Portugal ay aad u qalabaysan yihiin, isagoo shaaca ka qaaday inay goor dhow ay soo gaari doonaan Xeebaha dalka Soomaliya si ay ugu biiraan howlgalo ka dhan ah burcad badeeda Soomaalida oo dhibaatooyinka ba’an ku haya Maraakiibta shisheeye ee isticmaasha Badwaynta India iyo meelaha ka baxsan.